Io no fampitam-baovaon’ny namana mpanao gazety iray avy any an-toerana. Voalaza mantsy fa noho ny kolikoly dia ireo efa mpivarotra tao an-tsena indray no tsy nahazo trano rehefa vitan’ny orinasa Ambatovy ny tsena. Voalaza fa nanjaka ny risoriso sy ny sisi-bola izay heverina nataon’ireo mahitahita tamin’ny mpiandraikitra hatrizay ka nandrombaka toerana maro. Misy mpivarotra iray manana tsena marobe tokoa. Misy ireo olom-baovao tsy nanana tsena mihitsy voateny ho tafiditra anaty lisitra ihany koa.
Marihina moa fa efa noesorina tao an-kianja ny mpivarotra izay nafindra tao amin’io fanaovam-baolina tamin’ny fanmboarana tsena. Ary izao noesorina tao indray fa hamboarina ho toeram-pilalaovana manara-penitra ny kianja, kanefa ny tsena izay efa notokanana tamin’ny fitondrana teo aloha tsy misokatra hatramin’izao. Eny amin’ny sisin’arabe manamorona ny lalam-pirenena faharoa no manangana ny tsenany ireo mpivarotra izay mitady ny hohaniny isan’andro.
Ny lalana mihazo an’Anosibe an’Ala rahateo efa lasa tsena tanteraka ka tsy misy fiara afaka mifamezivezy intsony. Manjaka tanteraka ny gaboraraka ao Moramanga. Manampy trotraka izany koa ny olan’ny fifidianana any an-toerana. Samy migrevy amin’izay toeriny koa ireo mponina na mahakasika ny tsena na ny valim-pifidianana izay nofoanana. Potika tanteraka ny endrik’ity renivohitry ny Bezanozano ity sy ny fiarahamonina ao aminy ka miandrandra ny fitondrana izay mijoro ny mponina handamina ny fanjakan’i Baroa any an-toerana izay mahazo vahana.